Nubia Z17 Mini Phone (4GB RAM, 64GB ROM, 5.2 လက်မ) စျေးနှုန်းမှ ...
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်ဖုန်းများNubia Z17 mini ကိုဖုန်းမှ (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.2 လက်မ)
Nubia Z17 mini ကိုဖုန်းမှ (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.2 လက်မ)
စျေးနှုန်းသမိုင်း ZTE Nubia Z17 mini ကို Gobal ဗားရှင်း 5.2GB 4GB 64 652 Octa core Snapdragon စမတ်ဖုန်း 4G လက်မ
€ 144,26 - Aprilပြီလ 2020, 5
€ 207,87 - Aprilပြီလ 2020, 4
€ 144,26 - မတ်လ 2020, 21
ယူရို ၁၅၆.၈၇ - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊
€ 137,39 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 3
€ 145,98 - ဇွန်လ 2019, 24
€ 195,80 - ဇွန်လ 2019, 23
မှ: 2019 26 မေလ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 207,87 - Aprilပြီလ 2020, 4
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 137,39 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 3
ZTE Nubia Z17 mini ကို Gobal ဗားရှင်း 5.2 လက်မ 4GB 64GB Snapdragon 652 Octa-core 4G စမတ်ဖုန်း
[ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်] [တရားဝင်ဂလိုဘယ်ဗားရှင်း] ZTE Nubia Z17mini 5.2 လက်မ 4G Qualcomm မှ LTE ကိုစမတ်ဖုန်း ...
Nubia Z17 4G Mini ကိုစမတ်ဖုန်း
Nubia Z17 mini ကို NX569J 4G စမတ်ဖုန်း 5.2 လက်မ 4GB RAM ကို + ROM ကို 64GB
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအသုံးပြုမှုကိုသော့။ local area network သဟဇာတဖြစ်သေချာအောင်ပေးပါ။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကွန်ယက်ကြိမ်နှုန်းသည်။ ဤအကြောင်းအရာအားဝယ်ယူရှေ့၌သင်တို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော / ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
Nubia Z17 Mini ကို 4G စမတ်ဖုန်း 5.2 လက်မ Android ကို M က Snapdragon 652 Octa Core 1.8GHz 4GB RAM ကို 64GB ROM ကိုလက်ဗွေ Scanner NFC ကို 13.0MP Dual-နောက်ကင်မရာများ
display: 5.2 လက်မ FHD 2.5D Arc Screen, 1500: 1 ဆနျ့ကငျြဘနှုန်း 85 ရာခိုင်နှုန်းကိုအရောင်ရွှဲ, 424ppi
CPU ကို: Snapdragon 652 (MSM 8976) Octa-Core472 က x + x ကို A4 A53 1.8GHz, 64-bit မှာ
GPU ကို: Adreno 510
System ကို: (က Android M ကအပေါ် အခြေခံ. ) Nubia UI4
ကင်မရာ: AF နှင့်အတူနောက်ဘက်ကင်မရာ 13.0MP + 13.0MP နှင့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး + မျက်နှာစာကင်မရာ 16.0MP
navigation: GPS စနစ်, ကြီးမှာ Beidou, GLONASS
sensor: ambient light sensor, E-Compass, ဆွဲငင်အားအာရုံခံ, ဂိုင်ရိုစကုပ်, Proximity Sensor ကို, လက်ဗွေအာရုံခံ
SIM ကဒ်ကဒ်: dual-SIM ကို dual-standby, Nano SIM ကို + Nano SIM ကဒ်များ
2G: ဂျီအက်စ်အမ် 850 / 900 / 1800 / 1900MHz 1X CDMA / EVDO 800
4G: FDD-LTE ကို B1/B3/B5/B7/B8/B20 TD-LTE ကို B38 / B39 / B40 / B41
ဘာသာစကား: Multi ဘာသာစကား
OS ကို: Android ကို M က
SIM ကဒ်ကဒ်အမျိုးအစား: Nano SIM ကိုကတ်
အမျိုးအစား: 4G စမတ်ဖုန်း
CPU ကို: Qualcomm Snapdragon 652 64bit
ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်: 200GB မှတက် TF ကဒ် (မပါ)
Network မှအမျိုးအစား: CDMA, FDD-LTE ကို, ဂျီအက်စ်အမ်, TD-SCDMA, TDD-LTE ကို, WCDMA
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု: 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth, GPS ဂျီအက်စ်အမ်, Wi-Fi
စီဒီအမ်အေ: 1X CDMA / EVDO 800
4G LTE ကို: FDD B1 2100MHz, FDD B20 800MHz, FDD B3 1800MHz, FDD B5 850MHz, FDD B7 2600MHz, FDD B8 900MHz, TDD B38 2600MHz, TDD B39 1900MHz, TDD B40 2300MHz, TDD B41 2500MHz
screen size: 5.2 လက်မ
screen အမျိုးအစား: 2.5D Arc မျက်နှာပြင်, Corning Gorilla Glass
Auto Focus: ဟုတ်ကဲ့
back-ကင်မရာ: 13.0MP + 13.0MP
ဂီတပုံစံ: AAC, FLAC အ, MKA, OGG
ရုပ်ပုံပုံစံ:, BMP, GIF, JPEG, PNG
ဗီဒီယိုကို format နဲ့: 3GP, MKV, MP4
အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ: 3G, 4G, နှိုးစက်, Bluetooth Browser ကို, Calculator ကို, ပြက္ခဒိန်, ကင်မရာ, လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှု, လက်ဗွေ Unlocking, GPS MP3, MP4, NFC ပြည်သူ့
ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း: ဘလူးတုသ် V4.2
sensor: Ambient light sensor, E-Compass, ဆွဲငင်အား sensor, ဂိုင်ရိုစကုပ်, Proximity sensor
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် (mAh ဘက်ထရီ): 2950mAh
package အရွယ်အစား: 30.00 x ကို 25.00 x ကို 5.80 စင်တီမီတာ / 11.81 x ကို 9.84 x ကို 2.28 လက်မ
package အလေးချိန်: 0.3850 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 14.67 x ကို 7.25 x ကို 0.75 စင်တီမီတာ / 5.78 x ကို 2.85 x ကို 0.3 လက်မ
ZTE Nubia Z17 လုပ်ဆောင်ခြင်းလက်ကမ်းတွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကင်မရာနမူနာ (အင်္ဂလိပ်) နှင့်အတူ
ငါ ZTE Nubia Z17 ယောက်ျား၏ဖန်ဆင်း! ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Remix OS ကိုအတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
ZTE Nubia Z17 - လူသတ်သမား Xiaomi က Mi6 နှင့် OnePlus 5? တရုတ်အံ့သြသွားကြသည် ...
Nubia Z17 mini ကိုဖုန်းမှ (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.2 လက်မ) ဗီဒီယိုများ
ဒီထုတ်ကုန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုမှပထမဦးဆုံးဖြစ် "Nubia Z17 mini ကိုဖုန်းမှ (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.2 လက်မ) ပြန်ကြားချက် Cancel
Bluboo S1 ဖုန်းမှ (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 5.5 လက်မ)
Xiaomi က Redmi5ဖုန်းမှ (3GB RAM ကို, ROM ကို 32GB, 5.7 လက်မ)